တရုတ် Media နှင့် K media များတွင် Hyun Bin နှင့် Song Hye Kyo တို့ပြန်တွဲနေပီလားဆိုသော ကောလဟာလသတင်းများ ထွက်နေ | News Bar Myanmar
တရုတ် Media နှင့် K media များတွင် Hyun Bin နှင့် Song Hye Kyo တို့ပြန်တွဲနေပီလားဆိုသော ကောလဟာလသတင်းများ ထွက်နေ
တောင်ကိုရီးယား ပရိတ်သတ်များကြားတွင် လက်တလော ဂယက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ အကြောင်းအရင်းမှာ မင်းသမီး Song Hye Kyo ( ဆောင်းဟေဂျို ) ဟာ မင်းသား Song joong ki နှင့် ကွားရှင်းပြတ်ဆဲ အပီးတွင် သူမ​၏ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သော Hyun Bin ( ဗိုလ်ကြီး )နှင့် အဆက်အသွယ် ပြန်ရှိနေပီလားဟူသော သတင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သတင်းများ ထွက်လာရခြင်းမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရင်း များကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
1. Rumors on Sohu page… Sohu page ​၏ပြောပုံအရ ဆောင်းဟေဂျိုနှင့် ညီအမအရင်းသဖွယ် ခင်နေသော မင်းသမီး Park Sol Mi မှ သူမ​၏ Instagram တွင် The world they are living ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှ OST ( သီချင်း ) ကို screenshot ရိုက်၍တင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မင်းသမီး Song Hye kyo နှင့် မင်းသား Hyun Bin တို့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါသည်။
2. Song Hye Kyo မှ Comment ဝင်မန့်ခဲ့… အဆိုပါ သီချင်းကို screenshot ရိုက်တင်ထားထားသော Post ​၏ အောက်တွင် Song Hye Kyo မှ “ sister, ha ha “ဆို၍ comment ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 3. Netizens stir up rumors… ထိုကဲ့သို့သော အချက်များကြောင့် တောင်ကိုရီးယားမှ internet သုံးစွဲသူ့ အချို့ဟာ သူတို့​၏ထင်မြင်ချက်များကို ရေးသားကြရာမှ အဆိုပါသတင်းမှာ ပိုမို၍ ပျံနှံခဲ့ရပါသည်။
4. တရုတ် မီဒီယာမှ ထောက်ပြတဲ့အချက်… Song Hye kyo ဟာမကြာသေးမီက သူမ​ ၂၈ အရွယ်ရှိပုံကိုတင်ခဲ့ပီး အဲ့အချိန်တွေကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပုစံမျိုးဖြင့် post တင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ၂၈ နှစ်အရွယ်သည် Song Hye Kyo နှင့် Hyun Bin တို့​၏ ချစ်သူဖြစ်နေသော ကာလပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မင်းသား Hyun Bin ​၏ ပရိတ်သတ်များသည် ယခုလက်တလောတွင် ထွက်ရှိထားသော Crash Lansing on you ဇာတ်လမ်းတွဲမှ မင်းသမီး Son Ye Jin နှင့်သာ Dating သတင်းထွက်စေချင်ကြောင်း သူတို့​၏ သဘောထားများကို Internet စာမျက်နှာများတွင် ပြောဆိုနေကြသည်။
Next China Produce 2020 မှာ Luhan, Tao တို့နဲ့ အတူပါဝင်လာမယ့် Kris »
Previous « Bae Suzy နှင့် သူမ​၏ သိန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသောအိမ်ကြီး